Laser Engraving Machine Factory - China Laser Engraving Machine Manufacturers, Suppliers
1390 RECI W6 CO2 Laser Tube Laser Wood Kucheka Machine Mutengo
Chigadzirwa Tsananguro: 1. Yakatorwa kunze mutsara wegwara njanji uye yakakwira yekumhanya inotsika mota uye mutyairi kuita iyo yekucheka kutsetseka.2. Gamuchira yakasanganiswa furemu chimiro dhizaini kuita kuti muchina ushande zvakatsiga pasina ruzha;3. Kushanda kwakapfava, sarudzo yekuveza kutevedzana, danho rekugadzirisa, kuchinjika kuchinjika kwesimba relaser, kumhanya uye kureba kwenzvimbo yemunharaunda kana yese-imwe nguva yekubuda;4. Iyo yakavhurika software interface, inoenderana neAutocad, Coreldraw, yakaenda sculpture, Photoshop uye imwe vector gra...
Eco2 130w laser engraving muchina we Wood Acrylic Plywood
1325 Marble, Granite uye Dombo Laser Engraving Machine
Kucheka laser muchina ndizvo zvikuru zvigadzirwa zveJinan APEXCNC Equipment Co., Ltd.Isu tinewo aluminium blade tafura iyo inogona kumira zvinorema, inogona kubata 200kg zvinhu, yakakodzera kucheka uye kunyora yakaoma zvinhu, sehuni acrylic uye zvichingodaro.
Mini Laser Engraver |Diki Laser Engraver |4060 Laser Engraver Yevanotanga
Kucheka laser muchina ndizvo zvikuru zvigadzirwa zveJinan APEX CNC Equipment Co., Ltd.Isu tinewo aluminium blade tafura iyo inogona kumira zvinorema, inogona kubata 200kg zvinhu, yakakodzera kucheka uye kunyora yakaoma zvinhu, sehuni acrylic uye zvichingodaro.
Yakachipa 1390 Laser Engraver yeGirazi, Acrylic, Plastic, Wood
Kucheka laser muchina ndiko tghe chikuru zvigadzirwa zveJinan APEX CNC Equipment Co., Ltd.Isu tinewo aluminium blade tafura iyo inogona kumira zvinorema, inogona kubata 200kg zvinhu, yakakodzera kucheka uye kunyora yakaoma zvinhu, sehuni acrylic uye zvichingodaro.